Gbasara Anyị - KAIRDA GROUP CORPORATION
KAIRDA GRORP CORPORATIONguzobere na Dec. 2010, Onye isi na - emepụta NDT na China. enwezuola ihe ịga nke ọma n'igosipụta ahịa site n'inye ngwaahịa dị mma na ọrụ kacha mma maka ndị ahịa niile.
Main ngwaahịa ndị Mkpa Roughness Tester, Ultrasonic ọkpụrụkpụ nle, mkpuchi ọkpụrụkpụ nle, Portable ekweghị ekwe Tester, Ultrasonic Flaw Detector na na.
Ka ọ dị ugbu a, anyị na ndị nrụpụta a ma ama na ndị anyị na ha na-azụ ahịa na-arụ ọrụ iji nweta nnabata dịgasị iche iche nke ndị ahịa anyị.
KAIRDA ngwaahịa na-n'ọtụtụ ebe iji maka ule nke ịgbado ọkụ na ngwá, ígwè ọrụ na ndị ọzọ na elu-tech ụlọ ọrụ.
Ọ dị ka ịdị n'ọtụtụ ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ nchara, ụlọ ọrụ ndị agha, akụrụngwa mmanụ, akụrụngwa ụgbọala, ji esi mmiri ọkụ na arịa nrụgide, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ọkụ ọkụ ọkụ, ịkwa ụgbọ ala, ikuku, ụlọ ọrụ akụrụngwa, ụlọ ọrụ nri, ụlọ ọrụ sayensị, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ, nyocha & injinia obodo, wdg.
Site na uru ndị dị na arụmọrụ na asọmpi asọmpi, ngwaahịa KAIRDA nwere karịa 80% òkè ahịa na China. ma na-agbasawanye azụmahịa ụwa niile: Japan, Korea, Singapore, India, Philippines, Middle East, European, South America, Africa na na.
Dị ka ọkachamara NDT na-eme nchọpụta, ndị otu anyị nwere ike inye nkwado nkwado karịa ahịa dị na mpaghara yana ahụmịhe anyị zuru oke iji nyere gị aka ịme nyocha ọkachamara na nchebe ahịa, mepee ngwaahịa ọhụrụ na-aga n'ihu iji mepụta ohere maka ogologo imekọ ihe ọnụ. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-akwado gị ike ọrụ ire ere iji dozie nsogbu. anyị onwe anyị ngwaahịa na akwụkwọ ikike ruo afọ abụọ na ndụ-ogologo mmezi. Anyị ga-enye ọzụzụ mmezi yana ngwa eji akwụ ụgwọ. KAIRDA ji aka ya kee uru maka ụlọ ọrụ NDT ụwa dị ka ọrụ nke aka ya, enweghị ike ịnye ngwaahịa zuru oke n'ahịa, na-enye ndị ahịa nlezianya ọrụ, njikwa ezi obi iji mepụta ama ama.